आयो ‘टिकटकले बिगार्यो’ बोलको गीत ! (भिडियो सहित) - Sindhuli Saugat
आयो ‘टिकटकले बिगार्यो’ बोलको गीत ! (भिडियो सहित)
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ चैत २३ गते शनिवार काठमाडौं
पछिल्लो समय प्रख्यात भैरहेको टिकटकलाई सर्बसाधारणदेखि सेलिब्रेटीसम्मले प्रयोग गरिरहेका छन् । टिकटककै कारण कुनै सामान्य ब्यक्ति रातारात भाइरल बनिरहेका छन् । टिकटकको बढ्दो प्रयोगले समाजमा नकारात्मक गतिबिधि बढ्न थालेको भन्दै सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसैबीच टिकटकबारे गीत नै बनेको छ ।
टिकटकले ल्याइरहेको बिकृतिलाई व्यंग्य प्रहार गर्दै निर्माण गरिएको ‘टिकटकले बिगार्यो’ बोलको गीत बजारमा आएको हो ।
गणेश अधिकारीको शब्द रहेको यस गीतमा देवी घर्ती र समिर बिष्णु खत्रीले स्वर दिएका छन् । गीतको भिडियोलाई अविरल फिल्म्सले निर्माण गरेको छ । भिडियो हास्यरससहित उत्कृष्ट बनेको छ । गीतको भिडियोलाई बिष्णु भट्टराईको निर्देशन रहेको छ ।
भिडियोमा चर्चित हास्य कलाकार यादव सापकोटा (सरापे), सुशिला निरौला (बिमली), शितल शर्मा र अर्जुन कुँवरको सशक्त अभिनय रहेको छ भने बाल कलामारमा अविरल भट्टराई र अमृता पौडेलको अभिनय रहेको छ । गीतमा नारायणप्रसाद अर्याल र समिर विष्णु खत्रीको संयुक्त लगानी रहेको छ भने समिर विष्णु खत्रीले नै संगीत भरेका छन् ।
भिडियो हेर्नुस :–
पछिल्लाे - यौन हिंसालाई रोक
अघिल्लाे - सदावहार पूर्वयुवराज्ञी हिमानी (हेरौँ २० तस्बिर)